भाषा, संस्कृतिको अध्ययन र अनुसन्धानमा सरकार उदासीन रहेको छ : तीर्थ श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल लेखक संघ « Light Nepal
भाषा, संस्कृतिको अध्ययन र अनुसन्धानमा सरकार उदासीन रहेको छ : तीर्थ श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल लेखक संघ
Published On :9May, 2022 4:30 pm
लेखक तीर्थ श्रेष्ठ समाज सेवा, साहित्य लेखन र राजनीतिको त्रिपक्षीय यात्राका सफल यात्री मानिन्छन् । ३ बीस हिउँद–बर्खा काटिसकेका श्रेष्ठ अझै पनि ऊर्जाशील र अनुकरणीय पात्रको रूपमा परिचित छन् । खास गरी साहित्य र रचनात्मक लेखन यात्रामा दखल राख्ने तीर्थ श्रेष्ठ पोखरा मात्र हैन स्वदेश तथा विदेशमा समेत उत्तिकै परिचित पात्र हुन् ।
जीवन र जगतका कुरालाई सहज, सरस र सरल प्रस्तुति गर्नु नै साहित्य हो भन्ने तीर्थ श्रेष्ठ कविता र मुक्तक लेखनमा दिग्गज मानिन्छन् । तरलवादी आन्दोलनका एक हस्ती श्रेष्ठ शैक्षिक हित र सामाजिक विकासको उन्नयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका उनी पञ्चायतकालको अन्त्यका ३ वर्ष उप–प्रधानपञ्च भई पोखरामा सक्रिय राजनीतिमा होमिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका आस्थावान कार्यकर्ता भए पनि सबै विचारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने तीर्थ श्रेष्ठ साहित्यमा भने स्वच्छन्दतावादी धारको पक्षमा वकालत गर्छन् ।
७ वटा कविता, मुक्तक र गीत सङ्ग्रह प्रकाशन गरिसकेका श्रेष्ठ राष्ट्रिय तथा स्थानीय गरी बीस वटा भन्दा बढी संघ संस्थामा आवद्ध छन् । उनी राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, मोती पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार, वासुशशी पुरस्कार, भूपि स्मृति साहित्य पुरस्कार सहित दर्जन भन्दा बढी सम्मान तथा पुरस्कारबाट विभूषित भइसकेका छन् । साहित्य लेखनलाई नै जीवनको पर्याय बनाएका उनै कवि तथा साहित्यकार तीर्थ श्रेष्ठ लेखक संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि स्वतन्त्र समाचार सेवा (आइएनएस) का लागि गरिएको समसामयिक भेटवार्ताको मुख्य अंश ।
तपाई किन लेखक संघको नेतृत्वमा जानु भएको ?
नेपाली लेखक संघमा म केन्द्रीय सदस्य र उपाध्यक्ष पदमा बसिसकेको र यसका माध्यमले नेपाली लेखकहरूको हक हितको संरक्षणमा केही योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राखेर नेतृत्वमा आएको हुँ । यसका अतिरिक्त साथीहरूले नेतृत्व लिन आग्रह गर्नु भएकाले पनि म नेपाली लेखक संघको नेतृत्वमा आएको हुँ ।
लेखकहरूका केही साझा समस्या र उत्तरदायित्वहरू पनि छन् । तिनलाई वैयक्तिक स्तरमा सम्बोधन गर्न सकिन्न । त्यसका लागि संगठन आवश्यक पर्दछ ।
लेखक संघले लेखकीय स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धन कसरी गर्छ ? के के योजना छन् ?
अहिलेको अवस्थामा संविधानले नै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । तथापि बेलामौकामा स्रष्टाहरूको अभिव्यक्तिप्रति असहिष्णु स्वरहरू देखा पर्ने गरेका छन् । यस्तो बेला संगठित रूपमा प्रतिवाद र लेखकीय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि आवश्यक कदम उठाउन सकिन्छ । अहिले नै लेखकीय स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने दुस्साहस भने कसैले गर्न सक्ने अवस्था छैन।
संघलाई दलीय संलग्नताको साँघुरो घेरामा किन राख्नु परेको ?
संघ कुनै पनि दलको भातृ संगठन होइन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र हुने यही विश्वासको धरातलमा आधारित भएको राजनीतिक दलसँग निकटता स्वभाविक नै होइन र ?
नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि आज राज्य र समाज दुबैले लिनुपर्ने सोच, नीति र योजना के हुनसक्छ ?
नेपाली भाषा संकटमा छ । अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरू र आवश्यकताभन्दा बढी अंग्रेजी मोहले हामीलाई गाँजेको छ । आज हामी अंग्रेजीमा सोच्ने पुस्ताको उत्पादन गरिरहेका छौं । हामी हाम्रो परम्परा, संस्कृति र संस्कारबाट टाढा हुँदैछौं । यसबाट जोगिनु आवश्यक छ । मुलुकको शिक्षा पद्धतिमा पर्याप्त सुधारको आवश्यकता छ । मुलुकको इतिहास, संस्कृति, भूगोल र भाषाहरूको अध्ययन र अनुसन्धानमा सरकारले उदासीनता देखाएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू गहना मात्र भएका छन् । यस्तो उदासीनताका दुष्परिणाम देखिंदै छन् ।
देशमा काठमाडौं केन्द्रित प्राज्ञिक चिन्तनधारा प्रवल रहेको देखिन्छ, यस्ता परिवेशमा पोखराले सिर्जनात्मक आन्दोलनलाई कसरी हाँक्न सक्ला ?
अझै पनि राजधानी र मोफसलको भेद बाँकी रहनु दुर्भाग्य हो । सञ्चारको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले संसारलाई सबैतिर सहज पहुँचको सुविधा दिइसकेको छ । पोखराले नेपाली साहित्यमा विविध ढङ्गका गतिविधि र आन्दोलन मार्फत आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य देखाइसकेको छ । त्यसका विषयमा म थप चर्चा गर्न चाहन्न ।
नेपाल लेखक संघमा आवद्ध नभएका तर नेपाली भाषा साहित्यको साधनामा लागेकाहरूलाई कसरी जोड्नु हुन्छ ?
नेपाली लेखक संघमा आबद्धताका लागि हामी आग्रह गर्ने छौं । उहाँहरूको आबद्धताका लागि उपयुक्त परिस्थिति निर्माण गर्ने छौं।
संसारको सिर्जनात्मक दुनियामा हामी कहाँ छौं ?
लेखक संघका आदर्श लेखक साहित्यकारहरू को को हुन् ?
नेपाली लेखक संघको स्थापनामा संलग्न वीपी कोइराला, गोविन्दबहादुर मल्ल ‘गोठाले’ लगायतका लेखकहरू प्रति संघ श्रद्धा राख्दछ ।
प्रस्तुति– यदुनाथ बञ्जारा, पोखरा